Mozilla inoshandisa tekinoroji yeMicrosoft kugadzirisa browser yeFirefox | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inoshandisa tekinoroji yeMicrosoft kugadzirisa FIrefox
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Free Software, Windows
Kunetsekana nezvenyaya dzekuchengetedza uye huwandu hwevashandisi vasiri kuvandudza, Mozilla inoshandisa MIcrosoft tekinoroji kumanikidza kumisikidzwa kwekuvandudzwa
Mozilla inoshandisa tekinoroji yeMicrosoft kugadzirisa browser yeFirefox. Kutanga neFirefox 68, iyo yewebhu browser ye Mozilla inoshandisa Microsoft BITS (Background Intelligent Transfer Service) kupa mishumo. Mune mamwe mazwi, iyo tekinoroji iyo iyo Windows Gadziriso inoshandisa.
Nezve kuburitswa kweFirefox 70, BITS ichashandiswa neyekuzvipira yekuvandudza mumiririri sevamiririri. Iyo inotorwa pane kungova chikamu chebhurawuza pachayo. Izvi zvichaita kuti zvinyorwa zvive nyore kuisa.
Nei Mozilla ichishandisa tekinoroji yeMicrosoft?
Iko kukurudzira kukuru kwekuchinja kune BITS kunoshandiswa pamwe chete neyekuvandudza mumiririri ndeye ita kuti zvive nyore kune vashandisi vane inononoka kubatana kuti vawane zvitsva zvazvino.. Nenzira iyi, Mozilla inoda kugadzirisa shanduro dzisingachashandi dzebrowser dzinoshandiswa nevaya vasina bhurawuza kwenguva yakareba zvakakwana kuti zvigadziriswe zvakajairwa kuiswa.
Iine yazvino nzira yekushandisa BITS, zvigadziriso zvinogona kungotorwa pasi kana mumwe munhu aine Firefox inomhanya. Paunenge uchichinjira kune yakatsaurwa yekuvandudza mumiriri, zvinokwanisika kuti dziwanire kudzoreredzwa kumashure, pasina kukanganisa mashandiro ebrowser.
Maererano ne mugadziri kubva kuMozilla, zano nderekuti mumiriri wekuvandudza ndeuyu:
… Maitiro ekumashure anoramba achimhanya mushure mekuvharwa kwebrowser kuti utore nekushandisa zvidzoreso. Izvi zvinofanirwa kuita kuti zvigadziriswe zvive nyore kune wese munhu uye kudzikisira nguva inotora kuwana zvitsva zvevashandisi vasina kunyatsotsigirwa neazvino maitiro ekuvandudza nekuti havamhanye Firefox nguva dzose uye / kana kunonoka kubatana kweInternet.
Ngatitsanangurei kuti tiri kutaura nezveWindows. Mazhinji maLinux anogoverwa ane Firefox mumabhuku avo uye anoigadziridza kana mamwe masisitimu ehurongwa akagadziridzwa. Handizive kuti chii chichaitika kune mamwe mafomu ekumisikidza muLinux.
Asati agamuchira tekinoroji iyi, pane nhanho yapfuura. Sezvazvinotsanangura mumwe mugadziri neMozilla
Se nhanho usati waburitsa iyo yekuvandudza mumiririri, isu tichatanga kubvumidza Firefox kugadzirisa nekushandisa BITS pasina iyo yekuvandudza mumiririri.
Izvi zvichatibvumidza shanduko iri nyore kubva kune imwe yekuvhundutsa mashini kuenda kune imwe, pane kungoisiya zvese kamwechete. Parizvino, Firefox inodaidza BITS kuburikidza neiyo interface yakavakirwa mune bhanari. Iyi interface, yazvino, inotaurirana yakanangana neBITS, asi ichave yakagadzirirwa nenzira yekuti mune ramangwana inogona kutaurirana neBITS ichishandisa iyo Yekuvandudza Mumiriri semubatanidzi.
Izvi zvinokutendera iwe maneja BITS mabasa seMuno Mushandisi webasa, ndomaitiro atinoda kuti kurodha pasi kuti kuitike kana Yekuvandudza Mumiriri achivarodha wakasununguka.
Rangarira kuti Mozilla yaifanira kugadzirisa kaviri pavhiki bhurawuza nekuda kwematambudziko ekuchengetedza. Naizvozvo zvinowedzeredzwa haisi nyaya inofanirwa kuvimbwa pane kunaka kwevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mozilla inoshandisa tekinoroji yeMicrosoft kugadzirisa FIrefox
Benjamin Bhatani akadaro
Inotaridzika chaizvo seFirefox irikumhanya neChannel kana Edge fanboy. Zvinozivikanwa kuti Windows inogadziridza inotsamwisa, ndosaka vashandisi vazhinji vachivarega vachishandisa software yechitatu-bato, kana Firefox ichitsamira pane izvi zvigadziriso inogona kumira mune imwe vhezheni yapfuura, ichipa mutongo kuti ibhurawuza risingabatsiri uye risingachashandi nekupfuura mamiriro ekunze.
Pindura Bhatani Bhatani
Ichokwadi kuti kuchengetedza software-kusvika-zuva kwakakosha, asi ndine chokwadi chekuti handisi ndega uyo mushure mekugadziriswa awana kuti chimwe chinhu chaanoda hachishande, kana kuti chinozviita nenzira isingaite. senderana nezvandinoda / zvandinoda. Ndosaka ndichifarira kuve nehutongi hwakakwana hwezvandino gadziridza uye pandinozvivandudza, kazhinji mushure mekugadzira backup, uye dzimwe nguva apo kushamisika kugadzirisa hakuvhiringidze karenda yangu kana kushanda kuri kuenderera.
Kana ini ndiri kushanda pane chimwe chinhu uye ini handizove nenguva yekutsvaga mhinduro kana kudzoreredza kumashure zvigadziriso, ini ndinosarudza kutora njodzi dzacho ndodzosera iyo yekuvandudza kune imwe nguva yakakodzera.
Kune rimwe divi, kumanikidza iwe kuti uite zvigadziriso zvinoreva kushandisa chinongedzo chako uye kushandisa data pasina mvumo yako, kune chimwe chinhu chausingatombode nekuti unochiishandisa kaviri pagore.
Vanhu vazhinji vanotiza kubva paM $ Window $ chaizvo kuti vave nekutonga kwemaitiro edu (pakati pezvimwe zvikonzero). Uye iwo mapurojekiti anotora yakashata tsika yekudzidzisa vashandisi vavo sekunge vasina hunhu, vanozopedzisira varasikirwa nevashandisi, uye ivo vachasara neiyo ... Iyo.
Isu takura zvekukwanisa kuve nemutoro wezvedu sarudzo. Chero ani anoita zvisina basa anozotakura mibairo yacho. Zvichida nenzira iyoyo vanhu vese avo "vasingade kudzidza" vanova vakangwara. Avo vanogadzirisa zvinokamiwa nevasingazivi vane kodzero yekuwana raramo, handiti? Hahaha.
Raspbian 2019-06-20 iri pano, ichiwedzera rutsigiro rweiyo Raspberry Pi 4
Mhando dze RAM uye diski kupatsanurwa